Ra'isilwasaare Kheyre oo Booqday dadkii ku dhaawacmay Weerarkii Muqdisho – Puntland Post
Posted on July 8, 2018 by Cowke
Ra’isilwasaare Kheyre oo Booqday dadkii ku dhaawacmay Weerarkii Muqdisho
Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo uu wehliyo taliyaha ciidanka Booliiska ayaa xalay booqday cisbitaallada lagu daweynayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii aragagaxisadu ay la beegsadeen xarunta Wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku naf-waayay qaraxaas ay kooxda caadeysatay daadinta dhiigga Soomaaliyeed u qorsheeyeen inay ku gumaadaan shacabka, waxa uuna dhanka kale ballan qaaday in dadka ay soo gaareen dhaawacyada aan waxba looga qaban karin gudaha dalka ay dawladdu u qaadayso dalka dibaddiisa.
“Maanta waxaa dhacay qarax ay fuliyeen kooxaha arxanlaawayaasha ah ee dhaqankoodu yahay in shacabka baabi’iyaan. Inta ku dhimatay Allaha u naxariisto dhaawacana Allaha Bogsiiyo. Waxa aan rajeynayaa Shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan in ay nagala shaqeeyaan soo afjaridda kuwaan caadeestay in ay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed. Ciidamadu waa dadaaleen bilihii lasoo dhaafay hadana waxaan u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed in dadaalka lasii wadi doono. Dawladda Soomaaliyeed ma nasan doonto inta amnigu ka hagaagayo